Nkran Mantam mu - Wikipedia
Nkran Mantam mu
Nhwɛsode:Infobox settlement Nkran Mantam mu ne mantam a n'asase sua koraa wɔ Ghana mantam 16 no mu, ne tɛtrɛtɛ yɛ kilomita 3,245.ɛyi gyina hɔ ma ɔha mu nkyekyɛmu 1.4 wɔ Ghana asase mu. ɛno ne Mantam a ɛto so meinu a emu nnipa dɔɔso yiyie a edi Asante mantam akyi. Nnipa akenkan a ɛkɔɔ so wɔ afe 2010 mu no kyerɛ sɛ, emu nnipa dodoɔ yɛ 4,010,054 a egyina hɔ ma ɔha mu nkyekyemu 16.3.
Nkran mantam no yɛ mantam a nkurow, adan ne nwuma akɛse wo mu paa na nnipa no mu ɔha mu nkyekyɛmu 87.4 na ɛtete mmeae a ɛte saa. Nkran mantam no Ahenkrow no ne Nkran na, ɛno nso ne ɔman Ghana Ahenkurow.
2.1 Beaɛ ne ne keseyɛ
3.2 ɔman nkaedeɛ
3.5 Nsrahwɛ ahorow
3.8 Nnipa dodoɔ
5.1 Ntoasoɔ sukuu ahorɔw
5.2 Suapɔn Ahorɔw
6 Ade tɔn bea ahorɔw
8 Akukudam a wɔ yɛ Nkranfo
Wɔ afe 1960 mu no, na wɔfrɛ Nkran mantam no Nkran mpesua, na na asase no ka Apuei mantam nsase ho. Wɔ bosome a ɛtɔ so nson no da a ɛtɔ so 23, afe 1982 no, ɔsoafo no de mmara a ɛne (PNDCL 26) tee Nkran Mantam fii Apuei Mantam ho.
Beaɛ ne ne keseyɛEdit
Wo atifi fam no, Nkran mantam no Apuei Mantam na ɛbɔ hyeɛ, wɔ apuei fam nso, ɛne Frao mantam na ɛbɔ hyeɛ. Sɛ ɛba atɔe fam nso a , nkran mantam ne ɛpo kɛse Gulf of Guinea na ɛbɔ hyeɛ na wɔ anafo fam nso, ɛne mfinini mantam na ɛbɔ hyeɛ. Nkran mantam ne asase a esua koraa wɔ mantam 16 no mu.
Lakeside Marina bea
Kwame Nkrumae Nkaebea
Efua Sutherland mmɔfra agodibea
ɔman Tete nneɛma akroaeɛ
La anigye mpoano
Next Door mpoanot
Ada Paradise mpoano
Nkra Nhyiamu bea
Asoe a ehwe amammerɛ so
Kwame Nkruma Nkaebea
Nkranfo di afayɛ bi a wato din Homowo a ase kyerɛ ne sɛ ''ɔkɔm huro''. Saa afahye yi fii ase mfi pii a atwam. Wɔhyɛ saa fa yi de kae ɛkɔm kɛse bi esii wɔ nkranfo mu mfe bebree bi. Afahyɛ no yɛ aduane afahyɛ a wɔde hyɛ fa ma nkrafo kɔm abokosem no. Wodi saa afahyɛ yi wɔ Ɔsanaa bosome no mu na Nkran abusuakuo nyinaa hyɛ saa fa yi.
Adangbefo yɛ wɔn a wofi Ada na wɔn afahyɛ a wodi ne Asafotu afahyɛ a wɔnsan nso frɛ no 'Asafotufiam'. ɛyɛ afahyɛ a wodi de kae akofo ne nkunim a wodii wɔ wɔ ako ahorow mu. Wɔhyɛ saa fa yi ase wɔ yawada wɔ Kitawonsa bosome no mu kosi nawotwe a edi kan wɔ Ɔsanaa bosome no mu.
sɛnea wɔbekae nnema nti, sɛ edu afahye yi a, akofo no hyɛ won ako ntade ahorow na wɔde agorɔ asi anni. Saa bere yi nso yɛ bre wɔde ntetee ma mmabun wɔ ɔko ho. Saa afahyɛ yi ne otwa afahyɛ no hyia ma nti wɔyɛ amaneɛ ahorɔw a ahotew amammerɛ ka ho. Afahyɛ no du ne mpɔnpɔn so bre a ahenfo fura wɔn tam ahorɔw tenatena wɔn apankan mu,na wɔn manfoɔ de twenebɔ, osebɔ , nnwom ne asaw di wɔn akyi . Ahenfo no de nkyea ma wɔn ho wɔn ho, gu nsa na wɔhye wɔn ho wɔn ho den.
Trade Fair dwadibea
Asoe a ehw3 nnipa akekan so wo Nkran mantam no mu. Nkran mantam no wo mpesua a edidi so yi; La Nkwantanang Madina Mantam mu, Ashaiman Mantam mu Ledzokuku-krowor Mantam muAdenta Mantam ,Ga apuei Mantam .
Nnipa akenkan a ɛkɔɔ so wɔ afe 2010 mu no kyerɛ sɛ, emu nnipa dodoɔ yɛ 4,010,054 ,ɛma no bɛyɛɛ mantam a ɛto so mienu a wɔn mu nnipa dɔɔso yi paa. Asante mantam na edikan ma Nkramantam to so mienu. Nea nti a ɛte saa ne sɛ nkrufo di mu atukotena paa.Nhwɛsode:Historical populations
Ga-Dangmefo no yɛ Nkranfo kuo a wɔdɔɔso paa wɔ Nkran mmuasukuo no nyinaa mu. wɔn dodoɔ yɛ ɔha mu nkyekyɛm 18.9. Nkranfo nhenkurow no gu ahorɔw nsia; Ga Mashie, Osu , La, Tshie Nungua ne Tema. Wɔn mu biara wɔ ahengua a woyi so apayɛ. La kurow no wɔ Sika korabea a ɛsom La manfoɔ no. Nkran bɛyɛɛ titriw wɔ Ga-Dangme nkuro no mu ma nnɛ, abɛyɛ Ghana Ahenkurow. Na Nkranfo no adwuma ne kuayɛ nanso nnɛ, apopo dwuma ne adetɔn ne nwuma a agye nkran man no afa. Mmaa no pii yɛ dwadifoɔ na wɔn kununom nni wɔn yerenom sika so tumi. Nkranfo di ɛnade nti mmaa pii yɛ adedifo. Mmarima no yɛ ade a wodi agya ade ma nti wɔtena wɔn agyanom fie, Nanso sɛ mmea no ware mpo a, wɔn ne wɔn maamenon ne wɔn mma tena wɔn na fie.
Ofie biara mu wɔ nkranfo fie wɔ won abosom a wɔyɛ nyankomade ma wɔn na afahyɛ pii nso na ɛwɔ hɔ. Adangmefo no yɛ wɔn a wɔte bɛn Ghana mpoano efi Kpone kosi Ada, nsuo Frao ne Gulf of Guinea. Adangmefo no ne Ada, Kpone, Krobo, Ningo, Osuduku, Prampram ne Shai, won nyinaa ka Adangme a ne fibea ne Kwa,a ɛwɔ Congo mmusua mu. Adangmefo ne wɔn a wɔ dɔɔso wɔ nkranfo mu na nkran nsase ɔha mu nkyekyemu 70 yɛ wɔn dea.
Nnipa a wɔte Nkran mantam no mu ɔha mu nkyekyɛm 1.3 yɛ won a watu afri Ghana nkro afoforo so abetena.
Nnipa dodoɔ a wɔte nkran no mu dodoɔ no yɛ Akanfo na wogyina hɔ ma ɔha mu nkyekyɛm 39.8. Nea edi hɔ ne Ga-Dangme a wɔn dodoɔ yɛ ɔha mu nkyekyɛm 30.7. ɛno akyi no, ɔha mu nkyekyɛm 18 yea Ewe.
Wɔ afe 1960 mu no, na nkrofo dodoɔ a na wɔ wɔ Nkra Mantam no yɛ 491817. Nnipa dodoɔ a na wɔ wɔ hɔ wɔ afe 2000 mu no yɛ 2,905,76. Nnipa akenkan a ɛkɔɔ so wɔ afe 2010 no kyerɛ sɛ nnipa 4,10,054 na ɛwo nkran mantam.
ɔsom ahorow a ɛwɔ nkran mantam no ne
Kristofo – 76.8%
ɔsom afoforo – 4.6%
Amammere – 1.4%
Nkran man mu na ɔman no wiemhyɛnbea kɛse a wɔfrɛ no Kotoka International Airport in Accra no. Wiemhyɛnbea som Ghanafoɔ Afrika ne aman afoforo.
Akwan aitriw nnan na ɛwɔ ho - N1, N2, N4 ne N6- N1 no nam Nkran mantam kɔ fa Ada de besi N2 no mu wɔ Tema, akwan afoforo, Tetteh Quarshie ne N6 wo Achimota. ɛfa Kokrobite kɔpem Weija, ɛtoa so kɔpem Mfinifini Mantam mu kosi Elubo wɔ Atoe mantam mu. N2 no nam Apeui Mantam mu de si Asikuma, de kɔ Atifi Mantam mu kofa Atifi-Atɔe de kowie wɔ Kulungugu. N4 no nam Tetteh Quarshie na N6 fi ase fri Achimota. Saa akwan yi fa Atifi kopue Kumasi wo asante mantam mu.
Keteke Akwan nso nam Nkran kosi Tema
Ntoasoɔ sukuu ahorɔwEdit
St. Martins Senior High School
Accra Wesley Girls' High School
Accra Technical Training Centr
Frafraha Community Day Senior
Nkran mantam mu wɔ aban suapɔn ahorɔw miensa a ɛne University of Ghana wɔ nkran Ghana Institute of Journalism ne University of Professional Studies a ɛwɔ East Legon. ɛno akyi no, ankorɛnkorɛ suapɔn pii nso wɔ mantam no mu
Central University, Mataheko/Miotso, Accra
Jayee University College, McCarthy Hills
University of Professional Studies, Accra East-Legon, Ghana
Webster University, Ghana Campus, East Legon, Accra
Ade tɔn bea ahorɔwEdit
Melcom Shopping Centers , Accra Central, Adabraka, North Industrial Area, Spintex, Teshie, La, Dansoman, Achimota, Wejja, Kasoa etc
Oxford Street Mall - Osu
The Junction Mall - Nungua
The Achimota Mall - Achimota
A&C Mall - East Legon
International Allies F.C., Premier League Football
Tema Youth F.C., Premier League Football
Districts of Nkran Mantam mu
Mpesua ahorɔw a ɛwɔ Nkran Mantam mu
Nnipa Doduo (2010 akekan)
Nkran Mantam mu Nkran 1,665,086
Ada Apuei Ada Foah 71,671
Ada Atɔe sege 59,124
Adenta Mantam mu Adenta 78,215
Ashaiman Mantam mu Ashaiman 190,972
Ga mfifini Mantam mu Sowutuom 114,745
Ga apuei Mantam mu Abokobi 147,742
Ga atoe Mantam mu Weija 411,377
Ga anafo Mantam mu Amasaman 219,788
Kpone Katamanso Mantam Kpone 109,864
La Dade Kotopon Mantam La 183,528
La Nkwantanang Madina Mantam mu Madina 108,051
Ledzokuku-krowor Mantam mu Nungua 221,757
Ningo Prampram Prampram 70,923
Shai Osudoku Dodowa 51,913
Tema Mantam mu Tema 292,773
Akukudam a wɔ yɛ NkranfoEdit
Akukudam a wo fri Nkran
Terry Darious N Gibson Nima/Korle Gono
Joselyn Canfor Dumas Nkran
Azumah Nelson Nkran
Arthur Wharton Nkran
Guy Warren Nkran
Asamoah Gyan Nkran
Leo Myles-Mills Accra
Shatta Wale Nkran
Retrieved from "https://ak.wikipedia.org/w/index.php?title=Nkran_Mantam_mu&oldid=21923"
Last edited on 4 Ɔbenem 2020, at 17:00
This page was last edited on 4 Ɔbenem 2020, at 17:00.